Pez, ingqokelela entsha yezihlangu ze-SS22 zikaNaguisa | Bezzia
UMaria vazquez | 15/06/2022 18:00 | Izihlangu
INaguisa yenye yeefemu zaseSpain endingathanda ukuzifumana kwiwodrophu yam. Ndikubonisile izindululo zakhe ngaphambili eBezziya kwaye mhlawumbi ayizukuba sisihlandlo sokugqibela ekwenza oko. Kwaye yile nto intsha SS22 ingqokelela yezihlangu nguNaguisa Uphinde wandiqinisekisa!
I-Pez isimemo sokuphonononga kunye nokuqhawula kunye nokusekwa. Ingqokelela ephefumlelwe yimbonakalo yelanga emanzini, ekubengezeni kokwakheka kwentlanzi kunye neminye yemibala emangalisayo yezilwanyana zaselwandle. Ke ngoko, i-firm ifaka i-accents yombala kwingqokelela apho ii-classics zayo zingasilelanga nazo.
Ndiyawabulela amaphulo abeka iimveliso kwindawo ebonakalayo kwaye zibonise ngokucacileyo. Mhlawumbi yiloo nto ndibathanda kangaka. Iifoto nguCecilia Renard, isitayile sakhe sigunyaziswe nguSilvia Gutiérrez. Kuzo sinokuxabisa iimbadada zesikhumba zefemu, iimpawu zayo eziphothiweyo kunye ne-espadrilles; uyilo zonke ziyilelwe imihla ngemihla.
Iimpawu zokutyikitya zikhona kwakhona kule ngqokelela entsha. Namhlanje, nangona kunjalo, sigxile kuyilo olufunwa yifemu kwiphulo layo. Emfusa uAnea iimbadada ze maxi-effect ephothiweyo ngesikhumba kunye naseFalua, imodeli nayo iphothiweyo ngesithende esiphakathi esibotshelelwe enyaweni kunye nomtya owela i-instep ukuze ufumane inkxaso enkulu.
Kanye noku kungasentla, uBarbo ubalasele ngokuguquguquka kwayo, uhlobo lwesanti ye-T enesikhumba seegusha, inzwane evulekileyo kunye ne-ankle buckle. Kwaye i iimbadada zoononkala uAmura kunye noAlosa. Eyokuqala ephantsi kunye nemibala edibeneyo; eyesibini inobude obupheleleyo be-6,5 centimeters kwaye igudile.
I-espadrilles ukuthatha indima enkulu kweli phulo litsha. Bagqama ngombala wabo we-Ancor, i-espadrille ene-velcro kunye nokusikwa kwesikhumba segusha kufumaneka nge-yellow, brownie kunye nomnyama; kunye noBullo, omnye i-platform sandal ene-block heel, amanxeba anqamlezileyo kwifosholo, inzwane evulekileyo kunye ne-ankle buckle.
Ngaba ukhetha into yakudala? Uya kuyithanda i-Soc, i-espadrille iphefumlelwe yi "espardenya" umdaniso wengingqi oneribhoni ezisixhenxe; kunye ne-Thalis, isandali yohlobo lukanonkala ehlala kwikhava yethu kwaye ilungelelanisa kwinqanaba elinebhanti.
Ngaba uyayithanda ingqokelela yezihlangu ze-SS22 zikaNaguisa?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » fashion » Izihlangu » Pez, ingqokelela yezihlangu ezintsha ze-SS22 zikaNaguisa
Ingozi yokulungelelanisa iqabane